“ Ary ny zanakao rehetra dia ho samy efa nampianarin’i Jehovah, ka dia ho be ny fiadanan’ny zanakao” Isa. 54:13
Sekoly fianarana ny lanitra; izao tontolo izao no seha-pianarana hianarana amin’izany, ary ilay tsy manam-petra no mpampianatra ao. Nampitoerina tao Edena ny sampana iray tamin’io sekoly io; ary rehefa tanteraka ny planin’ny famonjena dia haverina hasiana fanabezana indray ao amin’ny sekolin’i Edena (...)
Eo anelanelan’ny sekoly natsangana tany Edena tamin’ny voalohany sy ny sekolin’ny lanitra any aoriana no misy ny fizotry ny tantaran’ity tany ity-tantaran’ny fandikan-dalàna nataon’ny olombelona sy ny fahoriany, ny sorona nataon’Andriamanitra, ny fanddresena ny fahafatesana sy ny ota, tsy ny fepetra rehetra tany amin’ny sekoly voalohany tany Edena tsy akory no ho hita ao amin’ny sekolin’ny fiainana ho avy. Tsy hisy intsony ilay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izay mety hiteraka fakam-panahy. Tsy hisy mpaka fanahy intsony any, ary tsy ho tanteraka any mihitsy ny fahafahana manao zavatra ratsy. Efa nahavita niaritra ny fitsapan’ny ratsy ny olona tsirairay tonga any, ary tsy misy intsony na dia iray aza amin’izy ireo mty ho voasariky ny herin’izany.
Rehefa any isika, ary esorina ny voalin’ny fahamaizinana izay nanakona ny fijerintsika, ary ho hitan’ny masontsika ny fahatsaran’ilay tanàna, izay zara raha hitantsika amin’ny “microscope” ankehitriny ; rehefa mijery ny voninahitry ny lanitra isika, izay tsy hitantsika raha tsy amin’ny alalan’ny “telescope”; rehefa voaisotra ireo faikafaikan’ny fahotana, dia hiseho amin’ny “fahasoavan’ny Tompo Andriamanitray” ny fahatsaranan’ilay tanàna manontolo (Sal. 90:17). Sehatra manao ahoana re izany hodinihintsika sy hianarantsika izany! Hovakin’ireo mpianatra mpandalina ny siansa any ireo boky mirakitra ny famoronana ary tsy ho hitany any ny fahatsiarovana ny lalan’ny faharatsiana. Mety hihaino ny feon’ny mozika avoaky ny natiora izy, ary tsy hahare mihitsy ny feo mihiakiaka na mitaraina vokatry ny alahelo. Hita soritra eny amin’ny zavaboary rehetra ny sora-tanana iray-indro hita ao amin’io tontolo lehibe midadasika sy mivelatra io “ny Anaran’Andriamanitra sy ny asany lehibe” ary na eny ambonin’ny tany na any an-dranomasina na eny amin’ny lanitra dia tsy ahitana soritry ny faharatsiana sy ny aretina intsony.
Izay rehetra nahay nanararaotra nampiasa be indrindra ny tombontsoa nahafahany nanakatra ny fahalalana ambony indrindra tety ambonin’ny tany, dia hitondra izany fahalalana sarobidy azony izany hanaraka azy, any amin’ilay fiainana ho avy. Nikatsaka sy nahazo ny zavatra tsy mety lo sy tsy mety simba izy ireo. Ny fahaizana mankafy ny voninahitra “tsy hitan”ny maso, ary tsy ren’ny sofina” dia mitovy tantana amin’ny fahalalana azo eo amin’ny fikolokoloana ny fahaiza-manao eo amin’ny fiainana eto amin’ity tany ity.